ကောင်းကင်တစ်ခုကို မွေးဖွားဖို့ အတွက် ဒီ လောကထဲကိုရောက်လာမိပြီ
ကျတော်ကတော့ ဘာရယ်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး Blogging ကိ်ုအရမ်းဝါသနာပါတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးပါ
အားလုံးကိုနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည် နောက်လည်းလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
မနေ့ ကမှ ကျတော့်ဘ၀မှာရှိတဲ့ အရင်းနီးဆုံးသူတွေထဲ က ကျတော်အချစ်ရဆုံး အဘိုး (အဖိုးရှင်) ဆုံးသွားခဲ့တယ် ကျတော် အရမ်း ၀မ်းနည်းတယ်..ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျတော်အရမ်းချစ်ရတဲ့ အဖိုးလေ ပြီးတော့ သားသမီးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ကြားထဲက သား ၃ယောက်နဲ့ သမီးအငယ်ဆုံး ၁ ယောက် မရှိနိုင်တာကိုလေ ..
အဖွားဆို အရူးတပိုင်းပါပဲ အားလုံးရဲ့ ၀မ်းအနည်းဆုံးနေ့ လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ကျတော် ဘ၀မှာ အရင်းအနှီးဆုံး တစ်ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ နောက်ထပ် ဘယ်သူ့ ကိုမှ မဆုံးရှုံးချင်တော့ဘူး..
"အဖိုးရှင် ကောင်းရာ သုဂတိသို့ လားပါစေ"
ဒီနေ့ တော့ကျတော် ရှာတွေ့ သမျတွေထဲက ခုခေတ်က ကိုရီးယား ဇတ်လမ်းတွဲတွေ သီချင်းတွေ ကအရမ်းခေတ်စား နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ မှတ်ယူလို့ ရပါတယ်..ကောင်မလေးတွေ(၁၀ကျော်သက်တွေဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့) အရမ်းကြိုက်ကြတယ်..
ကိုယ့်ကောင်လေး(ဘဲ)တွေကို ဆိုရင်လည်း ကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေနဲ့ တူအောင် ပုံသွင်းပေးလေ့ရှိကြတယ်. ဒါကြောင့် ကျတော် ရှာတွေ့ ခဲ့တာလေးကတော့ 200 Pound (ကြည့်ဖူးကြမှာပါ) သီချင်းကော ၊ ဗွီဒီယိုကိုကော ရှာတွေ့ ထားလို့ တင်ပြပေးချင်ပါတယ်..
အောက်မှာနားဆင်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်..ကောင်မလေးနာမည်က "Kim Ah" ဖြစ်ပါတယ်
Maria - Kim Ah-Jung
ကျတော် သူငယ်ချင်အကြောင်းတစ်ခါမှ မရေးဖူးဘူး ဒီတော့ ရေးကြည့်ရအောင်
ကျတော့်မှာ သူငယ်ချင်းတွေတော့ အများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့ ။သူငယ်ချင်းတွေ ကမတူဘူး တချို့ ကျတော့ ဒီလို တွဲလာရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုပြီး ဖြစ်သွားတာ နောက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ ထဲက ကောင်မလေးဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေးဖြစ်ဖြစ် ကို ကြိုက်ပြီးတော့ ၀င်ရောပြီး ပေါင်းသင်းရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုပြီး ဖြစ်သွားကြပါရော
ကျတော့် မှာတော့ ဒီလိုမျိုး သငယ်ချင်း ၂ မျိုးလုံးရှိခဲ့ပါတယ်..ဒီထဲက ကျတော် အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အပြုအမူတွေ အကျင်းစရိုက်လေးတွေ ကိုပြောပြချင်တယ် သူတို့ တွေ ကတော့ ကျတော် အရမ်းခင်တာပေါ့နော်
သူတ်ို့ တွေက ကျတော့်ထက် အရမ်းတော်ကြတယ်..ကျတော်ထက်လည်း အရာရာမှာ သာလွန်စွာ တက်ကျွမ်း
နားလည်ကြတယ်..ကျတော်ကတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘူး အဖက်ဖက်မှာ အားနည်းတယ်..
(ကျတော်ကတော့ ဒီထဲမှာ အညံ့ဆုံး(အရာအားလုံး) တစ်ခါတလေ သူတို့ ကို အရမ်း အားကျတယ်..သူတို့ လို မျိုး နေကြည့်တယ်..ဘယ်လို မှ မရဘူး)
သူတို့ တွေထဲမှာ ချမ်းသာတဲ့ လူကျတော့ သူဟာ အရာရာကိုနားလည်ခဲ့တယ်..(ငွေကြောင့်ပေါ့) လူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတယ်..မကောင်းတာက တစ်ခါတလေ သူဟာ အရမ်းစိတ်တိုတက်တယ်..ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ
ကိုတော့ တော်တော်လေး ခင်တယ် ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ မှာအကျင့်တွေ ပျက်နေတယ်. ကျတော်တို့ လည်း
ပျင်ပေးတာပဲ မရဘူး ပညာရေးမှာတော့ နည်းနည်း ချူချာတယ်..
နောက်တယောက်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို တော်တော်လေးခင်တက်တယ်..နေရာတကာလည်းဝင်ဆံ့တယ်.
အရာရာကို သူက သူ့ စိတ်ကူထည်းကလို ဖြစ်နေစေချင်တယ်..(စိတ်ကူယဉ်တယ်ပေါ့(ကျတော့်အမြင်ပါ)) သူမှာ လည်းရှေ့ကတယောက်လို ပဲ အကျင့်ဆိုးတစ်ခုရှိတယ်..
ကျတော်အကြံပြုချင်တာတော့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ (မိတ်ဆွေ) ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိသလို မကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လည်းရှိကြတယ်..ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား သိအောင်ကြိုးစားစေလို ပါတယ်..
ဥပမာ..သူက ကိုယ်အတွက် ကောင်းတယ်လို့ ထင်ရင်(အရာရာမှာပေါ့) သူ့ ကို အနီးကပ်ပေါင်းပြီး သူ့ အကျင့်လေးတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို လေ့ လာရင်း ပေါင်းသင်းပေါ့ သူ့ ကို လည်း ကိုယ် မကြိုက်တဲ့ အကျင်းလေးတွေ ကို ပြော ပြီး (ဒီလိုမျိုးကတော့ မကောင်းဘူးကွာ ဒီဟာကတော့ ကောင်းတယ်) တော့ တိုတိုင်ပင်ပင် နေပေါ့ ဒီ လိုဆိုရင် သူလည်း ကိုယ့် အပေါ်မှာ ကောင်းမှာပေါ့
မင်းနဲ့ မတွေ့ ရတာ ကြာနေပါပြီကွာ
တယောက်တည်း နေရတာ ငါ ဘာလို့ မပျော်တာလဲ
မင်းရှိတဲ့ အချိန်တွေကိုပဲ သတိရနေတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် အရင်ချိန်တွေ ကိုပြန်လိုချင်တယ်
မင်းကို မတွေ့ ရပေမယ့်
ငါတို့ အတူတူ သွားခဲ့တဲ့ နေရလေးတွေ
တွေ့ လိုက်တိုင်း မင်းကို ပဲ
မင်းနားမှာ ငါ့ဝိညာဉ် ရှိနေမယ်ဆိုတာ
(ကျတော့်ကို အရမ်းခင်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်အတွက်)
ဒီနေ့ တော့ ကျတော် ကျောင်းပြေးလာတယ်ဗျို့ အတန်းတွေက မတက်ချင်တဲ့ အတန်းတွေပဲဆိုတော့ ကျောင်းကတော့ ၁ပတ် မှာ ၂ရက်မတက်ရင် ကျောင်းအုပ်ဆီသွားပြီး Auto သွားထိုးရမှာလေ ဒါပေမယ့် မမူ့ တော့ပါဘူး။။
ကျောင်းပြေးပြေး နူတ်ခမ်းမွေးလို့ အားလုံးဝိုင်းလို့ နောက်နေလည်း..
သားတို့် တီတာ ငယ်စဉ်အခါ
မပျက်မယွင်း (မေတ်တာ) နှင်းပြီး
သားမိုက်ကိုပင် (မေတ်တာ) မပျက်
မသိ (မလိမ်မာ) ငယ်စဉ်အခါ